Exam Results for 2012. (1)
Music Alburm (2)
ရေးသားသူ Naung Htoolwin
9:06 AM | Labels: နည်းပညာ
ခေါင်းစဉ်မြင်လိုက်တော့ စိတ်ဝင်စားသွားမယ်ထင်ပါတယ်..ဒါပေမယ့် ဗဟုသုတအနေနဲ့ တင်ပြပေးလိုက်တာပါ..ဘယ်လိုလဲဆိုတော့..အခုတိုးတက်လာတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ လူတိုင်းနီးပါးက ကွန်ပျူတာ တွေ LapTop တွေ အစုံအလင်ကိုင်လာနိုင်ကြတယ်နားလည်တဲ့ သူရှိသလို..နားမလည်တဲ့သူတွေလဲရှိပါတယ်..ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီး ရောင်းချသူအချို့က ကွန်ပျူတာ CPU ကိုလိမ်ပြီးရောင်းပါတယ်..ဘယ်လိုလိမ်လဲဆိုတော့ နဂိုက CPU P4 ကို.. Dual Core i5 ဆိုပြီး လိမ်ညာ ရောင်းချလိုက်တာမျိုးပါဘဲ..ကဲ..ဒီမှာတင်ဇာတ်လမ်းစပါပြီ..တစ်ချို့ဝယ်မယ့်သူတွေကလဲ i3, i5 စသဖြင့် အသံလေးကြားရုံနဲ့တင် ၀ယ်ဖို့ဆန္ဒပြင်းထန်နေကြပါပြီ..ဒီလိုသာ လိမ်ရောင်းတာခံလိုက်ရမယ် ဆိုရင် ကိုယ့်အတွက် တော်တော်ကြီးကိုနစ်နာသွားမှာပါ..ကဲ..ဒီတော့ ဘယ်လိုလိမ်သလဲဆိုတာကို ဆက်ပြောပါ့မယ်..အခုနည်းတင်ပေးတာက..အားလုံးဘဲ သတိပြုမိကြစေဖို့ပါ..ကွန်ပျူတာဝယ်ရင် ကွန်ပျူတာကိုသေချာကြည့်ပါ..ဥပမာ.မိမိက ကွန်ပျူတာ ၀ယ်မယ်ဆိုရင် ပိုက်ဆံရှိပြီဆိုတာနဲ့ ချက်ချင်း ဆိုင်ကိုပြေးမ၀ယ်ပါသေးနဲ့ဦး..အရင်ဆုံး ကိုယ်ဝယ်လိုတဲ့ ဆိုင်ကို အရင်သွားပါ..မိမိစိတ်ကြိုက်ကွန်ပျူတာကိုတွေ့ရင် Model နံပတ်နဲ့အရောင်အမျိုးအစားကို မှတ်သားပြီး..အင်တာနက်ပေါ်သို့တက်ပါ..ပြီးတာနဲ့ မိမိမှတ်သားလာတဲ့ မော်ဒယ်နံပတ်ကို အင်တာနက်မယ် ရိုက်ပြီးရှာကြည့်ပါ။ အရောင်တူနေတယ်..ပုံစံတူနေတယ် ဆိုရင်တော့ ပြသနာမရှိပါဘူး..မတူဘူးဆိုရင်တော့ သတိထားဖို့အကြံပေးပါရစေ..
ကွန်ပျူတာကို အခုအထိ မပေါ်သေးတဲ့ pentium9လုပ်ကြည့်မလား .... ဒါက သူငယ်ချင်းတွေကို အကြောင်ရိုက်ပြီးနောက်လို့ရပါတယ် .. ကိုယ့်ကွန်ပျူတာရဲ့ cpu ဟာ ဘယ်လိုအမျိုးအစားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ .. ဥပမာ .. pentium III ဆိုကြပါစို့ .. ကိုက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုရောင်းချင်တယ်ပေါ့ ... မျက်နှာပန်းလဲလှချင်တယ်ပေါ့ ...ချက်ချင်းကို အခုအချိန်အထိ မပေါ်သေးတဲ့ pentium9အထိကိုပါ ပြောင်းပစ်လိုက်လို့ရတယ် ... စမ်းကြည့်မလား .. ကျွန်တော် ဒီပို့စ်လေးကို ရေးတာ နားမလည်တဲ့ သူငယ်ချင်းများကို မိမိကွန်ပျူတာ လိမ်ရောင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး ... သူများလိမ်လာမှာကို ကိုက နားလည်အောင်လို့ပါ ...
Hkey_local_machine>> Hardware>> Description>> system>> Central Processor ကို သွားလိုက်ပါ ..
Using computer without keyboard and mouse...ကွန်ပျူတာကို Mouth နဲ့သုံးမယ်...
8:55 AM | Labels: Windows7, နည်းပညာ
စကားပြောပြီး ကွန်ပြူတာ ကို ခိုင်းကြည့် ရအောင် ဆော့ဝဲလ်မလိုပါဘူး ၀င်ဒိုးမှာပါပြီးသားကို အသုံးချခြင်း ဖြစ်ပါသည်..
သူ့ကို ခိုင်းမယ်ဆိုရင် အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ခိုင်းလို့ရတယ်။။ကိုယ်ပြောတဲ့စကားကို
-အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာကို မတောက်တခေါက်တက်သော လူတစ်ယောက်
--အရင်ဆုံး ကွန်ပြူတာကီးဘုတ်ပေါ်က ၀င်းဒိုးပုံပါတဲ့ခလုတ်ကို ကလစ်လိုက် Start menu ပေါ်လာရင် contorl panel ထဲဝင်လိုက်ပါ။
Next အစ Ok က အစ အားလုံး စကာပြောနဲ့ပဲ ခိုင်းပါ
Samsung Galaxy Ace s5830i ကို Jellybeam custom rom တင်ကြမယ်..
11:35 PM | Labels: Android, Android_Rom
Samsung Galaxy Ace s5830i ဆိုတဲ့ဖုန်းလေးကို Version မြှင့်နည်း.Official rom တော့မဟုတ်ပါဘူး....Simplicity v3 (Jelly Blast) ဆိုတဲ့
Android (4.1) Jellybeam custom rom လေးပါ.....အောက်ကပုံလေးတွေက သူ့ Screen Shot လေးတွေပါ.
Simplicity v3 final ဒေါင်းရန်....
CWM zip ဒေါင်းရန်
1.အရင်ဆုံးကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာရှိတာလေးတွေကို Backup လုပ်ထားလိုက်...contacts တို့ messages တို့အရေးကြီးတာတွေပေါ့....
2.ဒေါင်းထားတဲ့ Rom zip ကို SD card ထဲထည့် CWM zip နဲ့နဲ့တူတူပေါ့...
3.ပြီးရင် CWM Recovery ထဲဝင်မယ်.CWM ၀င်ဖို့ဖုန်း ကိုပါဝါပိတ် Vol+ Power နဲ့ Home ကိုခဏတွဲနှိပ်ပါ ၃စက္ကန့်လောက်...အောက်ကပုံထဲကအတိုင်းရောက်ရင်ရပီ.....recovery ထဲမှာ vol up/down နဲ့ ရွေ့ပြီးတော့ Home ကို Enter အဖြစ်သုံးပါတယ်
4.Recovery မှာ နှစ်ကြောင်းမြောက်က...apply update from SDcard ထဲဝင် CWM zip ကိုရွေးပြီး CWM ကနေ Backup လုပ်ထားလိုက်...ပြီးရင်နောက်ကိုပြန်ထွက် wipe data/reset ကိုရွေး...reset လုပ်ပေး..wipe cache partition ပါလုပ်ပေးလိုက်ပါ
5.ပြီးရင်တော့ install zip from SD ထဲဝင် choose zip လုပ် ဒေါင်းထားတဲ့ rom zip လေးကိုရွေးပေးလိုက်ခဏစောင့် install from SD card complete လို့ပေါ်ရင်ရပြီ..
6.Errorတခုခု ပြပီးမရခဲ့ရင်ဖုန်းကိုပိတ် ရိုးရိုး Recovery ထဲဝင် rom zip ကိုရွေးပေးပါ တချို့ rom zip တွေက CWM က လုပ်လို့မရတတ်ပါဘူးး...
ဖုန်းကို Reboot လုပ်ပေးလိုက်...ပြန်တက်လာရင် jelly beam လေးနဲ့လန်းနေပါပြီ.............
6:00 PM | Labels: Flash, နည်းပညာ
Flash song လေးတွေလုပ်ပေးချင်တဲ့သူများအတွက်ပါ။
(star mouseEffect ဒေါင်းရန်) (နှင်းဆီ back ground(1))
(နှင်းဆီ back ground(2)) (ခေါင်းလောင်းback ground)
(Flash Player ဒေါင်းရန်) (ပန်းရောင် back ground)
(4 ground components ) (လိပ်ပြာ ၃ back ground)
(လိပ်ပြာ 1 back ground) (ရေလှိုင်း back ground components )
(Heart back ground) (Flower back ground)
(star back ground) (mouse effect letter)
(လိပ်ပြာmouse effect) (Snow components)
(ဖဲကြိုးcomponents ) (3Dအသဲနောက်ခံ)
(play and stop button) (3Deffect များကိုခွဲသုံးနည်းmovie ဖိုင်)
Truck Parking 3D 1.01
4:24 PM | Labels: Android, Android APPS
11:09 PM | Labels: Android, Software, နည်းပညာ
ဒေါင်း၍ရလာသော One Click Recovery.rar ကို ဖြေချလိုက်ပါ။ အဲဒီထဲမှာ ပါလာတဲ့ One Click Recovery.exe ကို ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ install လုပ်လိုက်ပါ။ desktop ပေါ်မှာ One Click Recovery ဆိုတဲ့ Icon လေး တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Recovery mode ၀င်ချင်တဲ့ ဖုန်းကို power ဖွင့်ပြီး ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်လိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် desktop ပေါ်က One Click Recovery ကို run လိုက်ပါ။ အောက်ပါပုံက box ကလေး တွေ့ရပါလိ့မ်မယ်။
Click To Enter Recovery ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ကဲ အခု ဖုန်းလေးကို ကြည့်လိုက်ပါ။ Recovery mode ထဲ ရောက်သွားတာ တွေ့ရပါလိ့မ်မယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ.......
11:14 AM | Labels: Joke
၁။ အလှုအိမ်တွင် ထမင်းစားလျှင် အရှာဖွေ အခံရဆုံးအရာမှာ _____ ဖြစ်သည်။
(က) ထမင်းလိုက်ပွဲ ပန်းကန် (ခ) ဇွန်း (ဂ) အသားတုံး ပန်းကန် (ဃ) လက်ဆေးပန်းကန်
၂။ ခိုးကူးခွေများတွင်အလကားပေးသော်လည်း မယူဘဲ ပိုက်ဆံပြန်အမ်းကြသဖြင့် ခိုးကူးသမားများအလွန်ကြိုက်ကြသော စီးရီး၏ အဆိုတော်မှာ_____ ဖြစ်သည်။
(က) စောသက် (ခ) ရှင်းရှင်း (ဂ) ဗီဗာဟိန်း (ဃ) အိန်အိန်း
၃။ရန်ကုန် မြို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ______ဖြစ်သည်။
(က) ဒုတိယ မြို့တော် (ခ) ကွန်ကရစ် မြို့တော် (ဂ) လိုင်းကား မြို့တော် (ဃ) လမ်းဘေးဈေးသည်မြို့တော်
၄။ နေရဲမာန် နောက်ဆုံးထွက်ခဲ့သော စီးရီး အမည်မှာ _____ ဖြစ်သည်။
(က) ဘယ်သူမှ မဖက်နဲ့ ငါပဲ ဖက်မယ် (ခ) ဖက်စရာ ဘယ်သူကျန်သေးလဲဟေ့ (ဂ) ဆံဖြူသွားကျိုးအသေဆိုး (ဃ) ဂလဲမောင်မောင်
၅။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ သူရဲကောင်းမှာ ____ ဖြစ်သည်။
(က) စိုင်းနော်ခမ်း (ခ) နေထက်လင်း (ဂ) ဂျွန်ဂို (ဃ) သီဟတင်စိုး
၆။ အကယ်ဒမီသေချာသောဇာတ်ကားမှာ ____ ဖြစ်သည်။
(က) အမေ ဇာတ်ကား (ခ) ဟာသဇာတ်ကား (ဂ) ပေါ်လစီဇာတ်ကား (ဃ) အချစ်ဇာတ်ကား
၇။ MPT ၏ ဆောင်ပုဒ်မှာ ____ ဖြစ်သည်။
(က) သုံးချင်သုံး မသုံးချင်နေ လျှာမရှည်နဲ့ (ခ) တို့ကတော့ ခပ်နှေးနှေးပဲ (ဂ) ဘယ်သူပြိုင်လို့ နှေးပါတော့နိုင် (ဃ) ဆံပင်တွေ ဖြူသွားကျိုးပစေ ပါးရေနားရည်တွေ တွန့်လည်းလဲလေ MPT speed အမြဲနှေးနေမယ်
၈။ သားစိုး၏ နောက်ထွက်မည့် အခွေမှာ_____ ဖြစ်သည်။
(က) နှဲမှုတ်တဲ့ မောင် (ခ) ရောသမမွှေမည့် နာဂစ်ဘေထုပ် (ဂ) အိုပါး အမေဂျမ်း စတိုင်လ် (ဃ) အပေါင်ဆုံးသမားလေး သားစိုးကျွန်တော်
၉။ ကြေးမုံ သတင်းစာသည်_____ သတင်းစာ ဖြစ်သည်။
(က) နာရေး (ခ) လက်ထပ်ပြီးစီးကြောင်းကြော်ငြာခြင်း (ဂ) သားသမီးအဖြစ်မှ စွန့်လွှတ်ကြောင်းကြော်ငြာသော (ဂ) ကောင်းကွက်များသာဖော်ပြသော
၁၀။ မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ဘောလုံးသမားများသည် အသက်____ နှစ်တွင် အသက်ထပ်မကြီးကြတော့ပေ
(က) မွေးကင်းစ (ခ) လမ်းလျှောက်ခါစ (ဂ) လူပျိုပေါက် (ဃ) ၂၃
Rooting Sony Ericsson Xperia Ray 4.0.3
1:39 PM | Labels: Android, Rooting
အရင်ဆုံးအောက်မှာပေးထားတဲ့ File ကိုဒေါင်းပါ။
ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့file ကိုဖြည်လိုက်ပြီး runme.bat file ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။
Press any key to continue...... ဆိုတဲ့နေရာမှာ "1"လို့ရိုက်ထည့်ပြီး Enterနှိပ်ပါ။
Root လုပ်နေစဉ်ဖုန်းကRestart နှစ်ကြိမ်ခန့်ကျပါလိမ့်မယ်။
အားလုံးပြီးဆုံးသွားရင်တော့သင့်ဖုန်းမှာSuperuser ဆိုတဲ့ application ရယ် Busybox ဆိုတဲ့ application
နှစ်ခုကို Install လုပ်ပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
"ALL DONE"ဆိုတဲ့ message လေးကျလာရင်တော့သင့်မှာ root access ပိုင်ဆိုင်သွားပါပြီ။
အဆင်မပြေတာများရှိရင် Chat box မှာဖြစ်ဖြစ် Comment မှာရေးခဲ့ပေးပါ။
iRepairMan for window
9:15 PM | Labels: Software, Windows
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ကွန်ပျူတာမှာ Foder Optionsတို့Task Managerဖွင့်မရတာတို့
ဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲလိုမျိုးဖြစ်လာရင်ဒီ software လေးကအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
Copyright 2011 နောင်ထူးလွင်.All rights reserved.Powered by Blogger